कथा - "जमानाका कुरा" - Sitemap
Loading... कथा - "जमानाका कुरा"
लेख कार्की राम राम राम ! परेवाको भाउ तीनसय । के जमाना आए ? चार रुपैयाँ जोडी परेवा बेच्ने मै हुँ ।
बिहान बिहान वरिपरि टोलका मान्छे टोलभित्र कसैका पनि घरमा आगो ताप्दै चिया गफ गर्ने चलन जो छ । आज हाम्रै घर अड्डा जमेछ । त्यहीँ आएर ओखरबोटे बढाउले यति कुरा मात्र के गर्नु भाथ्यो गैराघरका हजुरबाले थप्नु भो - "जमानाका के कुरा गर्नु बाबै गरि साद्दे भापो ! - उ बेला नेपाल भन्ते काठमन्नु पुएर आम्न एक मुईना लाग्थो ।
गाडी हेर्न धरान जान पर्थो । मकैको भात आघाउँजी खान पाईदैन थो । चामलको भात खान दशैं, त्यार, सराद आउन पर्थो । हामी खाली खुट्टा बनमा गुम्तीउँ । स्कुल थेनन् । काठको पाटीमा धुलो राखेर कखरा पढ्तिम् । यस्तो बिजुली काँ थ्यो र ? द्यालो बालेर गोठमा पढ्तिम । आजकाल तो काठमन्नु जान घर बाटै गाडी चड्चन् । साँझै नपरी पूराउँच अरे । चामलको भात पुनि खान मान्दैनन् केट्केटी । यत्रा यत्रा राजा मा'राजाका जत्रा ड्याम्बुट लाएर हिन्चन् । रातभरी बिजुली बालेर सुत्चन् । उज्यालो नभै स्कुल र क्याम्फस भन्दै भट्भटेमा कुद्चन् । बाँचीराखे अनेक देख्न पाईन्च गाँठे !"
कस्तो हैनत ! सहि थाम्दै माईला बढाबा बोल्नुभो के जमाना आए आए नि । यो गाउँमा पहिलोपटक रेडियो कप्तान बूढाले ल्या'का । हामी यति साना रेडियामा मान्छे कहाँ हुँदा हुन् ?
कत्रा हुँदा हुन् ? भन्दै कुरा गर्थिउँ। नजिक जान दिदैन थिए । अझै रमाईलो कुरा त के छ भन्देखुन् - एक दिन डल्लेदाईले मताने मामाका बारीका मकै चोरेछन् । मामाले देख्नुभएको रहेछ भन्न अप्ठ्यारो लागेछ । डल्लेदाई लाई घरमा बोलाएर भन्नुभएछ - भान्जाबाबु साइनोले मामा भानिज, खास गरेर हामी छिमेकी पनि । छिमेकमा बसेर तिम्ले यस्तो बिगार नगर्न पर्थ्यो ।
डल्लेदाइ आत्तिदै भनेछन् मैले के बिगार गरेर हौ मामा ?
त्यसरी अर्काका घुर्यानका बारीका मकै भाँचेर खुरुक्क आफ्ना घर लान हुँदैन थियो ।
हैन मामा मैले कहाँ लगेँ ? मामा पनि त्यत्तिकै चोर लाउने ? के म चोर हुँ ? भनेर डल्लेदाई जंगिएपछी मामाले भन्नुभएछ - नजंगेउन ए भान्जा मैले पनि त्यत्तिकै चोरेउ भनेको काँ हो र ? कप्तानका रेडियोले भनेको रपोत एक डोको मकै लगेछौ नि ।
अनि डल्ले दाइ राता पिरा भएर भनेछन् - हैन रेडियोले था' पाई हालेछ हगि मामा ! तर त्यो पनि झूट बोल्दो रैछ । एक डोको हैन आधा डोको चाहिँ लगेको हो । मामा माफ पाउँ हल्ला नगरिदिनु । म मकै पनि ल्याईदिन्छु र बरु तीन दिन खेताला पनि सघाउँछु । क्या सोझो जमाना !
( हा हा हा .हा हा ) सामूहिक हाँसो गुन्जियो ।
लगत्तै जर्णेल बढाउ बोल्नु भो - हैन जमानाका कुरा गर्दा पनि साह्रै घत लाग्छ हौ । अहिले पो जस्का घरमा पनि टिभी छन् फिलिम् हेर्छन् रमाईलो गर्छन् सवै टाठाबाठा भए । उ बेला यस्ता केही थिएनन् । एकदिन धरानमा फिल्म हेर्न भनेर म र डाँडाको रमेश गएका थियौं । फिल्म शुरु भएको एकछिन पछि पर्दामा यत्रो बडेमानको बाघ आयो । साँच्चै बाघ यहीँ आयो भनेर रमेशको त सातो गएछ बिचरा एकहप्ता बिरामी भएर सुत्यो ।
फेरि हा हा हा सामूहिक हाँसो ! यत्तिकैमा आमाले चिया ल्याउनु भयो लु जाडोछ चिया पिउदै गफ गरौं ।
बिचमा अकबरे ठूलाउ बोल्नुभो - "हन यो फिलिमले त मलाई पनि नमज्जाले झुक्याको छ हौ त्यस्का बाजे ! मावल बस्दा म खाली गोठालो जान्थेँ । एकदिन मामाघर नजिकैको चौधरी साथीले फिलिम हेर्न जाउँ मज्जा हुन्छ टिकस पनि मै काटौला भन्यो । चराउँदै गरेका बस्तु खेतमै लहराले बाँधेर फिलिम हेर्न गयौं । फिलिम शुरु भयो । एकछिन पछि कतै नभएर असिना पानी दर्क्यो । म त आत्तिएछु । ला ... गोरु खेतमा बाँधेका थिए भिजीसके होलान् अब मामाले मार्छन् भन्दै बाहिर कुदेँ । ए पख् पख् भन्दैथियो चौधरी म नसुनि बाहिर निक्लेकोत केका पानी पर्नु घामपो चर्की राखेका । असिना पानी त फिलिममा पो परेको रैछ । पछी चौधरीले मामागाउँ भरी हल्ला गर्देर लाज मर्नु पार्यो ।
सामूहिक हाँसो हा हा हा ।
यत्तिकैमा भतिजीलाई आमा कराउन थाल्नुभो हैन गफ सुनेर बस्छेस ? टिबिसन् जानू पर्छ भनेको हैन ?
जाउँला नि त कति मज्जा आईराछ ह्याँ गफ सुन्न । भतिजी नटेरी हाँस्दै सुनिरही ।
यत्तिकै मा आमाको पालो आएछ । जमानाका के कुरा गर्नु माईतमा हुँदा बुवाहरुले पढ्न दिनु हुन्न थ्यो । छोरी पढे छिट्टै पोईल जान्छन् भनेर । अनि हामी दिदीबहिनी पेवा कुखुरा बेचेका पैसाले मट्टीतेल किनेर राती पढ्थिउँ । एकदिन तेल सक्किएर दिदीले मलाई पठाईन् दोकान । तामाङ मीतबाउको दोकान थियो । सधैं तीन सुका माना तेल पाईन्थ्यो । धेरै दिन भएको थियो दोकान नगा'को मट्टीतेलको भाउ बढेको रहेछ । मितबाउले भन्नूभो कान्छी तेलको भाउ बढेर अहिलेत एक रुपैयाँ मानो भयो तीनसुकामा त आउँदैन त । मैले भने त्यसो भा मिताबाउ पैसा त यतिमात्रैछ एक मानो आउँदैन भने निम्ठो मानो मात्र दिनुन त । मितबाउ मूर्छा परेर हाँस्नुभो र भन्नुभो ए लाटी मट्टीतेल पनि निम्ठो र झुसी हुन्छ ? ...( हा हा हा ) सामूहिक हाँसो उसैगरी गुन्जियो । यहाँनेर चाहिँ मेरो पनि हाँस्दा हाँस्दै मुटुनै फुत्केला जस्तो भो ।
यत्तिकैमा भतिजीले हाँस्दै प्रश्न गरि तीनसुका मानो तेल पाइन्थ्यो ?
आमाले थप्नुभो - कुरा गर्छे ! कस्तो पाईदैन थ्यो त ? उतिबेला दुईमोहोर पाथी आलु थिए । आलु बेचेर बुवाले छ आनी सुनको बुलाकी बनाईदिनु भ'को ।
भतिजिलाई मज्जा लागेछ जिस्क्याई - हजुरआमा अचेल पनि आलु बेचेर बुलाकी आउँछ ? आउँछ खुब ! मन् का मन् अलैंची बेच्दा त आउँदैन अचेल त । आमाको जवाफ ।
हैन आज लाहुरे बूढाको छोरो माईलो घरको तलो छाप्ने सघाई द्याओ है भन्दै थियो जाने हैन ? कि सघाईमागेको छैन अरुलाई ?
बुवाको प्रश्न संगै जम्दार बढाउ बोल्नुभयो - जाओ जाओ हाम्रोमा त एक जुग् भो न बोलचाल न आउजाउ केही पनि छैन ।
अरे होर ? किन हौ जम्दार दाइ यस्तो ? लु थाहै पो थिएन ।
यो पनि एउटा कहानी छ ।
के हौ त्यस्तो ?
खासै ठूलो निहुँ त हैन । कुरो के भनेर भन्देखुन् ती लाहुरे बूढा भागेर काठमन्नु ग'का बेला आर्मी भएका हुन् नि त । हो त्यतिबेला छुट्टिमा घर आउँदा वरिपरि सबैलाई एक एक जोर लुगा बाँडे मलाई केही पनि दिएनन् । मैले भने हैन हौ दाजु मलाई पनि आर्मीको लुगा लाउन मन् छ । छ भने एउटा ज्याकेट भएपनी स्वेटर भएपनि देउन ।
लाउरेले त्यतिबेलै वचन लाए - तँ आफैं जान । तेरा पनि हात खुट्टा छन् आँखा नाक मुख छन् ।
यति भनेसी म केही पनि बोलिन । त्यसैको रिसले म पनि घर छोडेर हिंडे । एउटा नेवार ( श्रेष्ठ ) का घरमा दुई बर्ष बसेपछी म पनि भर्ना भएँ । एउटा ईख मेटियो । तर फेरि लाग्यो ती दाजूले त्यति नभनेका भए म आज यहाँ हुन्न थिएँ । ती दाजूलाई त धन्यवाद भनेर चिठीपो लेख्नु पर्यो भनेर चिठी पठाएँ । बूढाले पाएछन् तर केही जवाफ पठाएनन् । पछी दशैमा गाउँ आउँदा भेट भो । ढोग्न पर्यो भनेर गएँ बूढाले वास्तै गरेनन् । बोलाउँदा पनि बोलेनन् ।गल्ती के छ मेरो अरुलाई सोध्न लाएँ त्यो पनि बताएनन् । अचम्म ! पछी पछी खै किन हो घरका सवै बोल्नै छोडे । त्यहाँ पछी मैले पनि वास्ता गरिन । अबत धेरै पनि भो अप्ठ्यारो पनि हुँदो रैछ हौ बोलाउन । जम्दारबूढा फिस्स हाँसे ।
यति सुन्नासाथ दीपक दाइ बोल्नुभो ( जो वडा नागारिक मञ्चको अध्यक्ष ) पनिहो वहाँ । ए कुरो त्यसो पो थियो ? आज सम्म थाहैपो थिएन । त्यो माईलाले यता सवैलाई खेताला भनेकोछ । तपाईंलाई मात्र नभनेको रैछ उसोभा । बाउले वचन लाएर जम्दार हुनुभो । अब छोरोले खेताला नभने पनि एउटा केटो पठाईदिनु सघाउन ।
जम्दार - मरे पनि पठाउदिन । उस्लाई त्यसरी पुग्छ भने मलाई पनि पुग्छ । आखिर न मेरो गल्ती ! म किन झुक्नु ?
दीपक दाईले भन्नुभो बैगुणीलाई गुणले मार्नेहो । उ मूर्ख भए भनेर अाँफू पनि मूर्ख हुने हैन । एउटै गाउँमा बसेर तपाईंहरु जस्ता मान्छेले नै यसरी सानातिना कुरामा दुश्मनी साँधेर बसेपछी अबका सन्तानले के सिक्ने ?
यत्तिकैमा मास्टर काकाले पनि थप्नुभो । हो हो आज माईलाको घरको तला छापेर पनि सिध्याउनु पर्छ । लाहुरे र जमदारको दुश्मनी पनि सिध्याउनुपर्छ ।
यत्तिकैमा सवै हो मा हो मिलाउदै ताली पड्काउदै हाँसे । फकाएर जमदारलाई पनि लिएर गए ।
( केही दिनपछी )
फेरि उस्तै जमघटमा जर्णेल बा ले भन्नुभयो - हन ! अस्ति जमानाका कुरा निकाल्दा निकाल्दै लाहुरे र जम्दारको जमानाको दुश्मनी पनि केटाहरुले मिलाए । अरु कसैको दुश्मनी कसै संग भए भनहै । त्यसैगरी मिलाउनु पर्छ । खिक् खिक् खिक् बूढा हाँसे ।
संगै अरु पनि हाँसे ।
बूढाले फेरि थपे - गाउँभित्रै झगडा भए अर्का गाउँकाले फाईदा उठाउँछन् , देश भित्र झगडा भए बिदेशीले फाईदा उठाउँछन् । हामी मान्छेहौं जहाँ बस्छौं मिलेर एकढिक्का भएर बस्नुपर्छ ! आज हामी राम्रो भएर बसे भोलि सन्तानले यसै गरि जमानाका कुरा गर्दा गर्व गर्दै हाँस्न पाउँछन्।